फरकधार / भदौ ३०, २०७६
काठमाडौं– निर्माणाधीन काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्र्याकमा बन्ने पुल र सुरुङ निर्माणको ठेक्का विदेशी कम्पनीले मात्र पाउने भएका छन् । यस्ता पुल र सुरुङ ‘डिजाइन एन्ड बिल्ट’ मोडलमा बनाइने भएको छ ।
‘डिजाइन एन्ड बिल्ट’ मोडलअनुसार काम गर्दा आधारभूत नक्सांकनका आधारमा ठेकेदार कम्पनीले नै डिजाइन गर्नुपर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ । फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले स्वीकृत गरेपछि मात्रै ठेकेदार कम्पनीले काम सुरु गर्न सक्नेछ ।
पुल र सुरुङ बनाउने ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई मात्र दिइने गरी सेनाले काम अघि बढाएको छ । पुल बनाउन ६ वटा कम्पनी सूचीकृत भइसकेको सेनाका प्रवक्ता विज्ञानदेव पाण्डेले जानकारी दिएका छन् । जसअनुसार पाँचवटा चिनियाँ र एउटा टर्किस कम्पनी सूचीकृत भएका छन् ।
तीन महिनाभित्रमा सुरुङमार्गका लागि पनि कम्पनी छनोट गरिसक्ने सेनाको योजना छ । त्यसका लागि कम्पनीहरु सूचीकृत गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)अनुसार फास्ट ट्र्याकमा ८७ वटा पुल र तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्ता सुरुङ महादेवडाँडामा ३.३५५ किलोमिटर, धेद्रेमा १.६३० किलोमिटर र लेनडाँडामा १.४३० किलोमिटर लामो बनाइनेछ । यसअघि भदौ पहिलो साता मन्त्रिपरिषद्ले ती सुरुङको डिपिआर स्वीकृत गरेको थियो ।
यो आयोजना लागत १ खर्ब ७५ अर्ब अनुमान गरिएको छ । फास्ट ट्र्याकको कुल लम्बाइ ७२.५ किलोमिटर हुनेछ ।
[विचार] कहाँ हरायो नेपाली युवाको जोश ?
फरक धार | माघ ५, २०७६
नेपालमा किन बढ्दै छ सामूहिक आत्महत्या ?
फरक धार | माघ ६, २०७६